Donald Trump သည်သူ၏ရာသီဥတုမူဝါဒကိုပြောင်းပြန်နိုင်! | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
Donald Trump သည်သူ၏ရာသီဥတုမူဝါဒကိုပြောင်းပြန်နိုင်!
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကမိုးလေဝသဆိုင်ရာကွန်ယက်တွင်ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောကတိက ၀ တ်အားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှရုပ်သိမ်းခြင်းအကြောင်းရေးသားခဲ့ပါကယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအခြေအနေမည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကိုရေးသားလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron က၎င်းကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်မနေ့ကမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ ယူအက်စ်ဥက္ကpresident္ဌ Donald Trump ကမကြာသေးမီကပဲရစ်သို့အလည်အပတ်ခရီးစဉ်တွင်သူ့ကိုပြောကြားခဲ့သည် သူသည်သဘောတူညီချက်တွင်သူ၏တိုင်းပြည်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရေးအတွက်အဖြေရှာရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်.
Macron ကရှင်းရှင်းလင်းလင်း Trump နှင့်ပတ်သက်။ လုပ်ချင်တယ် “ ငါတို့ရဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအပါအ ၀ င်မဟာဗျူဟာဆိုင်ရာပြallနာအားလုံးအပေါ်ယုံကြည်မှုအပြန်အလှန်တည်ဆောက်မှုကိုကျွန်တော်တို့စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ မည်သို့ဤမျှမဟုတ်ပါ, ဤအကြားရာသီဥတုနှင့်ဆက်စပ်သောပြissuesနာများကိုကိုင်တွယ်ရန် Trump ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံးနီးပါး၏သဘောတူညီချက်များအကြောင်းကိုပြသသောသဘောထားကွဲလွဲခြင်းနှင့်ငြင်းပယ်ခံရလည်းလည်းမရှိ။ Macron က Donald Trump သည်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းအကြားဆက်နွယ်မှုအကြောင်းကြားသိခဲ့ပုံကိုရှင်းပြခဲ့သည်။ စိတ်ချပါ မိမိအလုပ်ရပ်များ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့် Trump သူအဖြေတစ်ခုရှာဖွေရန်ကြိုးစားသွားခဲ့သည်မှတ်ချက်ပေးထားသည် လာမယ့်လအနည်းငယ်အတွင်း။
1 Trump ပြtheနာကိုသတိပြုမိဖြစ်လာမှစတင်ခဲ့သည်
2 Macron ပွဲစဉ်ထဲကသူ့ရင်ဘတ်ယူ
Trump သက်သေပြခဲ့သည့်အလွန်ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းကို, Emmanuel Macron, ရှင်းပြဖို့သွားလေ၏။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတိုက်ဖျက်ရေးကိုသင်မစွန့်လွှတ်ရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံ၏မြို့ကြီးများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်သင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လှုပ်ရှားမှုများ။ Macron ကဆက်ပြောသည် Trump နှင့်အတူတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုထိန်းသိမ်း၏အရေးပါမှုကို။ ယူနိုက်တက်စတိတ်သည်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကိုတိုက်ဖျက်ရန်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုနယ်ပယ်ကိုပေါင်းစည်းနိုင်ခြင်းသည်အဓိကကျသည်။ သင်သည်ဘက်ပေါင်းစုံလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုနှင့်ပါ ၀ င်ရမည်။
ပြီးခဲ့သည့်ကြာသပတေးနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအပြီးတွင် Trump ကသူ၏နောက်ဆုံးရာထူးနှင့်ပတ်သက်။ တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်နိုင်ကပြောသည်။ သူကကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့ပြီးသောမှတ်ချက်ပေးခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာမြင်ရလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အချိန်တန်တဲ့အခါငါတို့စကားပြောကြမယ်။ တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါကအံ့သြစရာပါ၊ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းကောင်းလိမ့်မယ်။
Emmanuel သည်ပါရီနှင့်ပြင်သစ်တို့၏ခိုင်မာသောပုံရိပ်ကိုပြသရန်ခရီးစဉ်၏အားသာချက်ကိုအသုံးပြုလိုခဲ့သည်။ သူကပြင်သစ်၏ Trump ၏ပုံရိပ်ကိုယခုပိုကောင်းဘို့ပြောင်းလဲသွားနှင့်ပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်ကြောင်းယုံကြည်တယ်။ ကြာသပတေးနေ့ညတွင်သူမဇနီးကဲ့သို့ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ရန် Eiffel Tower ၏ထိပ်ဆုံးတွင်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုရွေးချယ်ခဲ့သည်ဟုသူကရှင်းပြခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » Donald Trump သည်သူ၏ရာသီဥတုမူဝါဒကိုပြောင်းပြန်နိုင်!